भुलेर पनि बिहेलगत्तै नगर्नुस् यस्ता काम, अन्यथा बिग्रन सक्छ घरबार ! - समृद्ध नेपाल
भुलेर पनि बिहेलगत्तै नगर्नुस् यस्ता काम, अन्यथा बिग्रन सक्छ घरबार !
बिहेलगत्तैका सुरुवाती दिनमा एक–अर्काप्रति प्रस्तुत हुने शैलीले तपाईंको पूरा जिन्दगी कस्तो बनाउने भन्ने कुरालाई लगभग निक्र्यौल गर्छ । सानातिना लाग्ने तर वैवाहिक सम्बन्धलाई गम्भीर असर पार्ने केही यस्ता विषय छन् जुन तपाईं बिहेलगत्तै भुलेर पनि नगर्नुस् बिहे खर्च बिहेमा तपाईंको धेरै पैसा खर्च भएको हुन सक्छ । ऋणको बोझ बढेको पनि हुन सक्छ । तर, जीवनसाथी भित्र्याउन नपाउँदै बिहेको खर्चको कुरा उठाउनुभयो भने ठान्नुस् तपाईं गलत गर्दै हुनुहुन्छ । हो कुनै न कुनै दिन सुनाउनैपर्छ, तर विनातनाव रमाइलो गर्न चाहना राख्ने सुरुवाती दिनमा यो कुरा गर्नुभयो भने जीवनसाथीसामु तपाईं सानो चित्तको ठहरिनुहुनेछ।मजाक बिहेको दिन जीवनसाथीले गरेको ड्रेसअप र गतिविधि मन परेको थिएन भने पनि भोलिपल्टदेखि नै खण्डन गर्ने काम नगर्नुस् । जे भइसकेको थियो त्यसलाई स्वीकार्दै प्रशंसा गर्नुस् । सुरुवातमै तपाईंले मजाक गर्दा जीवनसाथीको सोच नकारात्मक बनिदिन सक्छ ।
भूपू मायालु जीवनसाथीलाई कहिल्यै पूर्वमायालुसँग दाँजेर हेर्ने नगर्नुस् । दुईजनालाई दाँज्ने काम गर्नुभयो भने यसले तपाईंको सुन्दर जीवनमा भलो गर्दैन । पुरानो सम्बन्ध पूरै भुलेर नयाँ अध्यायलाई स्विकार्नैपर्छ नत्र सम्बन्ध टुट्न सक्छ मिल्ने साथी तपाईं सही नै हुनुहुन्छ तर जीवनसाथीले तत्काल बुझ्न नसक्दा तपाईंको सानो कुरा पनि सम्बन्धमा गलपासो बनिदिन सक्छ । त्यसैले विपरीत लिंगी कोही मिल्ने साथी छ भने पनि बिहेको सुरुवाती दिनमा केही टाढै बस्नु उचित हुन्छ । किनभने दुई–चार दिनको यात्रामै जीवनसाथीले तपाईंको स्वभावलाई पूरै पहिचान गर्न सम्भव हुँदैन ।
असहयोग: बिहे गरेर दुईजना भएपछि दुवैले एक–अर्काप्रति सहयोगी भावना राख्नैपर्छ । मेरो काम म आफँै गर्न सक्छु तिमीले गर्नुपर्दैन भन्ने र आफू पनि जीवनसाथीलाई सहयोग नगर्ने हो भने सम्बन्धमा दरार पैदा हुन सक्छ । बिहेपछि पूरै पारदर्शी हुन जरुरी हुन्छ पारिवारिक विवाद कतिपयले घरपरिवारको इच्छाविपरीत पनि बिहे गरेका हुन सक्छन् । तर बाआमाले नमान्दा–नमान्दै पनि मैले तिमीसँग बिहे गरेको हो भनेर जीवनसाथीलाई तात्तातै नभन्नुस् । यसो भन्दा जीवनसाथीको ध्यान तपाईंको त्यागभन्दा बढी परिवारविपरीत केन्द्रित हुन सक्छ । यो नै घरभित्र कलहको बिउ बनिदिन सक्छ जागिरमा जोड स् आत्मनिर्भर हुनु जायज कुरा हो । तरजीवनसाथी बेरोजगार छ भने बारम्बार जागिरकै प्रसंग निकालेर आजित नबनाउनुस् । बरु जागिर खोज्न जीवनसाथीलाई मद्दत गर्नुस् । सुरुमै हतोत्साहित पार्ने काम नगर्नुस् ।
बुद्ध चित्तको खेतीले बनायो करोडपति, एउटै बोटबाट एक करोड
दसगजा क्षेत्रमा बनाइएका भारतीयहरुको घर भत्काउदै नेपाल प्रहरी सक्दो सेयर गरौ ।
उदयपुरमा ठूलो परिणामको लागुऔषध सहित एक पक्रउ
आइफोन–१२ मा चार्जर नदिएकाले एप्पललाई १९ लाख अमेरिकी डलर जरिवाना !
नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलको प्रसारण बन्द !
छोरीको बिहे गर्ने बाउको गजब तरिका !
काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ : रबिन्द्र मिश्र
आजमात्रै नेपालमा ६ वर्षकी बालिकासहित कोरोनाले लियो ९ जनाको ज्यान !
नेपाल प्रहरीको इतिहासकै साहसिक कदम,गृहमन्त्रीका भाई र सभामुखलाई समेत छाडेनन आइजीपी खनालले !
तितेपातीबाट यसरी कमाउँन सकिन्छ लाखौँ-करोडौँ दाम !
कागती र बेसारपानी पिएँ, ६ दिनमा कोरोनालाई परास्त गरेँ”